Bera Mibonoka Sy Ny Fifanarahana Mamanàlan’ireo Andaniny Roa: ny Fifandraisana Vaovao Amerikàna-Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2016 17:52 GMT
Sary: Flickr / Jim Nix / Nataon'i by Kevin Rothrock
Tamin'ny adihevitry ny filoha lefitra Amerikana tamin'ny herinandro talohan'ny 9 Oktobra lasa teo, tao anatin'ireo rantsana maro nitsangana nihofahofa hanapaka fandraisam-pitenenana, nanohy ity fampielezankevitra ity tamin'ny zavatra tsy fanao matetika ilay kandidà Repoblikana, Mike Pence: rehefa miresaka momba an'i Rosia. Namerina ny antsoiny hoe “ohabolana tranainy” i Pence, niteny tamin'ireo mpanatrika hoe, “Tsy maty velively ny bera Rosiana; mibonoka fotsiny izy.” Natao hilazàna ny fandrahonana mieloelo ataon'i Rosia amin'i Etazonia izany teny izany.
Ny fanenon'izany ohabolana izany amin'ny sofin'ireo Amerikana tsy zatra aza no tena mahazendana, tsy tena misy marina amin'ny kolontsaina Rosiana io. Ny tena marina, ny tafatafa niaraka tamin'i Pence nifanaovany tamin'ny National Review tamin'ny 2014 no hany nisy niteny izany. “Asehon'ny tantara fa tsy maty velively ny fikasàn'ny Bera Rosiana; mandeha mibonoka fotsiny izy ireo,” hoy izy tamin'ilay mpanangom-baovao, John Fund.
Kanefa, raha misy zavatra tena tian'ny Aterineto Rosiana, dia ny zavatra diso, ny tsy fifankahazoan-dresaka, ary ny tsy fahaizan'ny olona maneho ny tiany ho lazaina. Tsy ela akory taorian'ilay adihevitra, naneso an'i Pence tao amin'ny pejy Facebook-ny ny mpitondra tenin'ny Ministeran'ny Raharaha Ivelan'i Rosia, Maria Zakharova. Nanoratra tamin'ny teny Anglisy mihitsy aza i Zakharova, izay nisy fotoana nizara ny poziany fitiavan-tanindrazana tao amin'ny Facebook:
Na hita ho noforonin'i Pence samirery aza ilay “ohabolana Rosiana”, mampiseho kosa ny fitomboan'ny fihenjanan'ny tady eo amin'i Washington sy Maosko io. Taorian'ny tsy fifankahazoan-kevitra ny faramparan'ny volana Septambra momba izay nidaroka baomba ny fiaran'ny Firenena Mikambana nanatitra fanampiana noho ny maha olona tany amin'ny tanàna Syriana an'i Alep tratra fahirano, nilaza ny porofo nahatafiditra an'ireo hery mitam-piadiana Rosiana ireo tomponandraiki-panjakana any amin'ny firenena Tandrefana.
Miaraka amin'ireo maty voamarina ho 20 isa ary ireo mpirotsaka an-tsitrapo sy sivily maro mbola miady amin'ny fahafatesana, milaza ny tomponandraikitry ny Firenena Mikambana, Jens Laerke, fa azo raisina ho heloka bevava amin'ny ady ilay fihetsika. Nanamarina ny mpandrindran'ny ekipan'ny Mpanao Vonjy Taitra ao amin'ny Firenena Mikambana fa ho atao ho heloka bevava amin'ny ady ilay fanafihana, raha toa ka afaka porofoina fa niniana nokendrena mivantana ireo mpiasa mpanampy amin'ny maha-olona.
Hatramin'ny nisian'ilay fanafihana, natsahatra daholo ireo fiaran'ny Firenena Mikambana mitatitra fanampiana ho an'i Syria.
Nandritra ireo herinandro nanaraka ilay fanafihana an-habakabaka, nandà mafy ny fidirany tamin'izany i Maosko, ka lasa lavitra mihitsy hatrany amin'ny fiampangàna an'i Etazonia ho nikarakara ilay fanafihana, nilaza fa nahita drôna “Predator” Amerikana tany Alep ny mpanara-maso Rosiana, minitra vitsy taorian'ilay fanafihana.
Ny ekipan'ny fanadihadiana manana loharano misokatra “Bellingcat,” anefa, namoaka porofo nanipika ny fidiran'i Rosia tamin'ireo fanafihana. Tao amin'ireo potipotika tavela, nahita ny ambinà OFAB-250-270 ireo mpamonjy voina— izay baomba tsy mibaiko tena namboarin'ny Rosiana. Araka ny Bellingcat, “voarakitra be fa ampiasan'ny fiaramanidina mpiady Syriana sy Rosiana amin'ireo fanafihana an-habakabaka any Syria io baomba io. Tsy ampiasain'ny fiaramanidin'ny OTAN ireo baomba ireo, indrindra moa fa ireo drôna toy ny ‘Predator.’”
Satria niteny nivantana ny hanadihady an'i Rosia sy Syria amin'y resaka heloka bevava amin'ny ady ireo tomponandraiki-panjakana any Washington, nampiantona ny fifanarahana mikasika ny fanomezana plutonium izay efa voasonia efa maherin'ny folo taona nialoha ny Filoha Vladimir Poutine. Avy eo, ny 5 Oktobra, nanafoana fifanarahana nokleary iray hafa iarahany miasa amin'ny Amerikana eo amin'ny resaka fikarohana siantifika mifandray amin'ny nokleary sy ny angovo i Poutine.
Milaza i Kremlin fa vonona ny hamerina ny fifanekena fifanarahana nokleary izy, raha toa manaiky ireo karazana fepetra maromaro i Etazonia, tafiditra amin'izany ny fampitsaharana ireo sazy ara-toekarena atao amin'i Rosia noho ny nampiasany miaramila tao Okraina, fandoavana onitra tamin'ny vokadratsin'ireo sazy ireo tamin'ny fandraharahana Rosiana, ary ny fanenana ny isan'ireo andiany Amerikana any anatin'ireo firenena OTAN amin'ireo sisintanin'i Rosia.
Araka an'i Maosko, valinkafatra nilaina natao tamin'ireo “fihetsika tsy namana” nataon'i Etazonia ny fampiatoana ireo fifanekena. Nampitsahatra ny fifanekena nokleary i Kremlin ora vitsy monja nialohan'ny nanambaràn'ny Trano Fotsy ny fanapahany ireo fifampiresahana mikasika ny fampijanonana ny fitifirana rehetra miaraka amin'i Rosia amin'ny ady any Syria. Hanohy hifampiresaka ihany anefa i Etazonia sy Rosia, mikasika ireo daroka an-habakabaka mikendry ireo toeran'ny ISIS ao amin'ny faritra, mba hialàna amin'ny fifampijabahana na fifandonana tsy nahy.
“Nanao ireo zavatra rehetra ao ambany fahefàny mba hamotehana ny fifampitokisana izay tokony namporisika ny fifampiraharahàna ny fitantànan-draharaha Obama,” hoy ny minisitry ny raharaha ivelany Rosiana tamin'ny fanambaràna ofisialy mikasika ny fampitsaharana ny fifanarahana. “Tianay ho azon'i Washington fa tsy afaka, amin'ny tànana iray, mampiditra sazy ho anay izy, amin'ny zavatra mety tsy hampaninona ireo Amerikana, ary amin'ny tànana iray hafa, manohy manao fifampiraharahàna voafantina amin'ireo toerana maha-metimety azy ireo.”
Alexey Pushkov, senatera ao amin'ny Fivoriamben'ny Federasiôna ary filoha teo alohan'ny Kaomitin'ireo Raharaha Ivelan'ny Duma-mpanjakana, nanoratra tao amin'ny Twitter fa efa ela no tsy nisy intsony ny fahatokisana tsara amin'i Etazonia:
Omaly, tamin'ny fahitalavitra, nandroso hevitra aho ny tsy hiresahana intsony ny “fahatokisana tsara” sy ny “tsy fanànan'i Etazonia tsiny”. Tena efa izany no lany andro.
Hitan'ieo mpikambana amin'ny mpanohitra an'i Kremlin, izay mitsikera amin'ny ankapobeny ny governemanta noho ny fanilihany andraikitra amin'i Etazonia momba ireo olana anatiny, fa mampihomehy ny hoe mangataka onitra noho ireo sazin'ny firenena Tandrefana i Maosko ankehitriny, izay nolazain'ireo tomponandraiki-panjakana, taona maromaro lasa izay, fa lasa zavatra tsara nanampy ny toekaren'i Rosia.
Nanome tsiny ireo fangatahan'I Kremlin i Alexey Navalny, ilay mpikatroka mafana fo manohitra ny kolikoly, izay nanao fampielezankevitra nahagaga tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna tany Maosko, telo taona lasa izay:
Mangataka onitra amin'ireo sazin'i Etazonia i Poutine. Tena mahagaga! Nilaza tamin'ny fahitalavitra, roa taona lasa izay, ireo manampahaizana fa nahitam-bokatsoa ireo sazy ireo.
Nananihany ihany koa ny mpanao gazetin'ny mpanohitra sady mpiady tamin'ny Adin'i Tchétchène, Arkady Babchenk, nanipika ny lazan'ny T-shirt tamin'ireo roa taona lasa nanehoana sarinà fitaovana miaramila Rosiana miaraka amin'ny teny faneva hoe “Sazy? Aza atao izay hihomehezan'ny “Iskander” [bala afomanga]-ko!” Eo anatrehan'ireo ezaka vaovao ataon'i Maosko mba hamerenana ireo fahaverezana tamin'ilay nolazainy fa sazy “mampihomehy”, ireo akanjo ambony izao—fa tsy ireo sazy—no hita ho tsy misy dikany.
Mangataka onitra avy any Etazonia i Poutine noho ireo fahaverezana avy amin'ireo sazy, tafiditra amin'izany ireo “fahaverezana tamin'ny fampidirana ireo fanoherana ny sazy nilaina.” Ka izay e, efa nahazo ny fihomehezanao ve ianao? Tafandria mandry!